Xildhibaanada kasoo jeeda Puntland ee laba aqal oo 6 qodob kasoo saaray hadalkii wasiir Cabdullahi Goodax | Caasimada Online
Home Warar Xildhibaanada kasoo jeeda Puntland ee laba aqal oo 6 qodob kasoo saaray...
Xildhibaanada kasoo jeeda Puntland ee laba aqal oo 6 qodob kasoo saaray hadalkii wasiir Cabdullahi Goodax
Muqdisho (Caasimadda Online) – Xildhibaanada Golaha Shacabka ku matala deegaanada Puntland oo manta kulan isugu yimd waxa ay kaga hadleen khilaafka ka dhaxeeya Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya iyo tan Dowlad Goboleedka Puntland.
Mudanayaashaan oo warbaahinta la hadlay kulankooda kadib waxa ay wax laga xumaado ku tilmaameen in xiligaan uu xoogeysto khilaafka salka ku haya qaadista imtixaanka sanadeedka iyo bixinta shahaadada.
Xildhibaanada iyo Senatarada ayaa sheegay inay la xisaabtamayaan Wasiir Goodax, waajibkooda dastuuriga ka gudan doonaan, waxaa ay sidoo kale tilmaameen inay arrintan kala hadli doonaan Madaxda dowladda Federaalka, sida Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Qaar ka mid ah Xildhibaannada ayaa duray mas’uuliyadda Wasiir Goodax, iyagoo sheegay in aanu qaadi karin xilkaas culus oo aanu isu keeni karin Soomaalida kala tagtay, waxaana ay ugu baaqeen Madaxda dowladda Federaalka inay soo farageliyaan.
Halkaan hoose ka akhriso qodobada ay soo saareen
2: Ma jiraan Xildhibaano ka tirsan labada Aqal oo ka qeyb qaadan waayey xalinta arrintaan,balse uu jiro doorweyn ay ka qaateen si xal loo gaari lahaa,iyaga oo la kulmay Wasiir Goodax Barre iyo Wasiirka Waxbarashada Puntland.
5: In aan la kulmeyno Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare kheyre oo ay mas’uuliyad ka saaran tahay dhacdadaan mugdiga gelineysa Waxbarashada Ardayda Soomaaliyeed.